Maxaad Kala Socotaa In Dhulka ay Maamusho AL-Shabaab Uu Yahay 20% - Awdinle Online
Maxaad Kala Socotaa In Dhulka ay Maamusho AL-Shabaab Uu Yahay 20%
October 26, 2019 (AO) – Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in weerarradeeda Soomaaliya ka socda ay hoos u dhigeen AL-shabaab islamarkaana ay soo koobantay dhulka ay hadda ka maamulaan Soomaaliya.
Agaasimaha Xiriirka dadweynaha Taliska Mareykanka ee Afrika, Chris Karns , oo wareysi siiyay Idaacadda Codka Mareykanka ee VOA, ayaa sheegay in Al-shabaab ay Soomaaliya maamulayeen 905 ilaa 85% maantana ay ku egyihiin 20%.
Chris Karns, ayaa wareysigiisa ku sheegay in Mareykanka uu xoogga saaro tababarka Ciidamada Soomaaliya gaar ahaanna Kumaandoosta loo yaqaanno DANAB oo uu sheegay in ay yihiin Ciidan awoodi doona in ay la dagaalamaan Al-shabaab.
Waxaa uu sheegay Chris Karns, in howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya uu horumar ka sameeyay gudaha Soomaaliya guulo wax ku ool ahna ka gaaray Soomaaliya.
Chris Karns, ayaa ballanqaaday in ay xoojin doonaan tababarka Ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya ee DANAB.
Mareykanka ayaa dhawaan sheegay in uu 450 Askari u soo dirayo Soomaaliya si ay ula dagaallamaan Al-shabaab.
Al-shabaab ayaa 30kii September sanadkan waxaa ay weerar ku qaadeen saldhigga Balli Doogle ee Gobolka Shabeellaha hoose halkaas oo uu Mareykanka saldhig ku leeyahay.
Al-shabaab waxaa ay sheegeen in weerarkaas ay ku dileen 121 Askari oo ka mid ah Ciidanka Mareykanka ee saldhigga joogay iyo 40 Shaqaale oo u shaqeynayay Qaramada Midoobey.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in weerarkaas uu uga dhaawacmay hal Askari, weerar rogaal celis ahaana ay ku dileen 10 ka mid ah AL-shabaab.
Previous articleFatahaadaha Webiga Shabeele oo kusii baahaya Beledweyn iyo Hareeraheeda
Next articleBanaanbax balaaran oo ka socda muqdisho:- (Sawiro)